Che: Part Two (2008) | MM Movie Store
၁၉၅၆ ခုနှဈ . . ။ရှကျလှလေေး တဈစီးဟာ ပငျလယျထဲမှာ တအိအိ ရှနေ့တေယျ။ လှလေေးက ခပျသေးသေးပါပဲ။ တကယျတနျး ဆနျ့တာက ၁၂ လောကျထိပဲ ဆနျ့တာ။ လှနျရောကြှနျရော ၂၅ ယောကျ ပေါ့။ ဒါပမေယျ့ လှပေျေါမှာ လူ အယောကျ ၈၀ ထိ ပါလာတယျ။အဲ့ဒီရှကျလှလေေးဟာ တကယျ့အပွငျမှာ ရှိခဲ့ပါတယျ။
ရှကျလှပေျေါက လူ အယောကျ ၈၀ က လညျး တကယျ ရှိခဲ့ပါတယျ။ အခွားသူတှတေော့ မဟုတျပါဘူး။ နှောငျတဈခြိနျမှာ တဈကမ်ဘာလုံးကို ကိုငျလှုပျပဈတော့မယျ့ ရဲဘျော ကပျပတိနျကွီး Fidel Castro (ဖီဒယျ ကပျဈထရို)၊ ဆရာဝနျ ပြောကျကြား စဈသညျတျောကွီး Che Guevara (ခဂြှေဗေားရား) တို့ ပါဝငျတဲ့ အယောကျ ၈၀ တပျဖှဲ့ငယျလေးပါ . . . ။
သူတို့ဟာ တဈခြိနျမှာ ကမ်ဘာ့သမိုငျးရဲ့ အငျမတနျဆနျးကယျြလှပ သသေပျတဲ့ တျောလှနျရေးကွီးကို ဆငျနှဲတော့မှာ ဖွဈတယျ။ ရုပျရှငျရဲ့ ပထမပိုငျး – Che နဲ့ Fidel Castro တို့ တှဆေုံ့ကွရာကနေ ကြူးဘားတိုငျးပွညျကွီးကို နောကျဆုံး အာဏာရှငျအစိုးရ မပွုတျပွုတျအောငျ ဗငျြးကွတဲ့ အထိ ကို တှမွေ့ငျရမှာပါ။
၁၉၆၄ မှာ ကြူးဘားနိုငျငံကိုယျစား UN စငျမွငျ့ပျေါတကျပွီး မိနျ့ခှနျးပွောနတေဲ့ Che ရယျ . . . ၁၉၅၆ တောကျလြှောကျမှာ သနေတျကိုငျထားတဲ့ တျောလှနျရေးသမားကွီး Che ရယျ . . ဆိုတဲ့ Che ရဲ့ life event နှဈခုကို ယှဉျပွီး ပွထားပါတယျ။
ရုပျရှငျရဲ့ ဒုတိယပိုငျး – ၁၉၆၆ နောကျပိုငျး။ Fidel Castro က တဈနိုငျငံလုံးကို မိနျ့ခှနျးပွောနတေယျ။ Che ဟာ ကြူးဘား အစိုးရအဖှဲ့ကနေ နှုတျထှကျသှားပွီဆိုတဲ့အကွောငျး။
နောကျတဈနမှေ့ာတော့ ထိပျပွောငျပွောငျနဲ့ အမှေးမရှိ အမြှငျမရှိအောငျ ရုပျဖကျြထားတဲ့ Che ဟာ ဘိုလီးဗီးယား (Bolivia) တိုငျးပွညျထဲကို တိတျတိတျကလေးရောကျသှားပွီး တျောလှနျရေးအသဈတဈခုကို စတငျဖို့ ပွငျနပေါတော့တယျ။
Che ရှာသားတှကေို ကိုယျ့မိသားစုဝငျမြားပမာ ဆကျဆံကွတယျ။ ပိုကျဆံမပေးပဲ ရှာသားတှဆေီက ဘာ ပစ်စညျးမှ ယူခှငျ့မရှိဘူး။ တျောလှနျရေးလုပျတဲ့ သူပုနျတပျဆိုပမေယျ့ အရမျးစညျးကမျးရှိတယျ။ မုဒိနျးမှုသာ ကြူးလှနျကွညျ့ပါလား။
ခကျြခငျြး သဒေဏျပေးခံရမယျ အဲ့စဈသား . . ။“ ဆရာ . . ရနျသူ့တပျက အတျော စနဈကတြယျ။ဆေးရုံတောငျ ရှိတယျ ” ဆိုတဲ့ အာဏာရှငျဘကျက တပျမှူးရဲ့ ပွောစကားကို ဒီကားမှာ ကွားရမယျ။အဲ့ဒါတှထေကျ ပိုကွီးအရေးကွီးတာ တဈခကျြရှိတယျ။ ဘာလဲဆိုတော့ ဒီကားကို စဈကားလို့ ယူဆပွီး ကွညျ့မယျ့သူတှကေို ပွောခငျြတာပါ။
တဈခါတလေ စဈပှဲ တဈပှဲလုံးကို သနေတျပွောငျးက ကညျြထှကျနတောပဲ ပွပွီး ပွီးရငျလညျး ပွီးသှားပါတယျ။ စဈ တကယျဖွဈနတောကို ပွရငျလညျး ရိုးရိုးရှငျးရှငျးကွီးပဲ ပွပါတယျ။ ဘာမှ မကှနျ့ထားဘူး။ဒီကားရဲ့ ဇာတျညှနျးဟာ . . not about ဒုနျးဒုနျးဒကျဒကျ ပါ။
it’s about loving kindness ပါဗြာ . . ။ဒီတော့ ခခြနျးပါမှ ကွိုကျမယျဆိုရငျတော့ Che က ရှောငျသငျ့တဲ့ ကားပါ။
၁၉၅၆ ခုနှစ် . . ။ရွက်လှေလေး တစ်စီးဟာ ပင်လယ်ထဲမှာ တအိအိ ရွေ့နေတယ်။ လှေလေးက ခပ်သေးသေးပါပဲ။ တကယ်တန်း ဆန့်တာက ၁၂ လောက်ထိပဲ ဆန့်တာ။ လွန်ရောကျွန်ရော ၂၅ ယောက် ပေါ့။ ဒါပေမယ့် လှေပေါ်မှာ လူ အယောက် ၈၀ ထိ ပါလာတယ်။အဲ့ဒီရွက်လှေလေးဟာ တကယ့်အပြင်မှာ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ရွက်လှေပေါ်က လူ အယောက် ၈၀ က လည်း တကယ် ရှိခဲ့ပါတယ်။ အခြားသူတွေတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ နှောင်တစ်ချိန်မှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ကိုင်လှုပ်ပစ်တော့မယ့် ရဲဘော် ကပ်ပတိန်ကြီး Fidel Castro (ဖီဒယ် ကပ်စ်ထရို)၊ ဆရာဝန် ပျောက်ကျား စစ်သည်တော်ကြီး Che Guevara (ချေဂွေဗားရား) တို့ ပါဝင်တဲ့ အယောက် ၈၀ တပ်ဖွဲ့ငယ်လေးပါ . . . ။
သူတို့ဟာ တစ်ချိန်မှာ ကမ္ဘာ့သမိုင်းရဲ့ အင်မတန်ဆန်းကျယ်လှပ သေသပ်တဲ့ တော်လှန်ရေးကြီးကို ဆင်နွှဲတော့မှာ ဖြစ်တယ်။ ရုပ်ရှင်ရဲ့ ပထမပိုင်း – Che နဲ့ Fidel Castro တို့ တွေ့ဆုံကြရာကနေ ကျူးဘားတိုင်းပြည်ကြီးကို နောက်ဆုံး အာဏာရှင်အစိုးရ မပြုတ်ပြုတ်အောင် ဗျင်းကြတဲ့ အထိ ကို တွေ့မြင်ရမှာပါ။
၁၉၆၄ မှာ ကျူးဘားနိုင်ငံကိုယ်စား UN စင်မြင့်ပေါ်တက်ပြီး မိန့်ခွန်းပြောနေတဲ့ Che ရယ် . . . ၁၉၅၆ တောက်လျှောက်မှာ သေနတ်ကိုင်ထားတဲ့ တော်လှန်ရေးသမားကြီး Che ရယ် . . ဆိုတဲ့ Che ရဲ့ life event နှစ်ခုကို ယှဉ်ပြီး ပြထားပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ရဲ့ ဒုတိယပိုင်း – ၁၉၆၆ နောက်ပိုင်း။ Fidel Castro က တစ်နိုင်ငံလုံးကို မိန့်ခွန်းပြောနေတယ်။ Che ဟာ ကျူးဘား အစိုးရအဖွဲ့ကနေ နှုတ်ထွက်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်း။
နောက်တစ်နေ့မှာတော့ ထိပ်ပြောင်ပြောင်နဲ့ အမွှေးမရှိ အမျှင်မရှိအောင် ရုပ်ဖျက်ထားတဲ့ Che ဟာ ဘိုလီးဗီးယား (Bolivia) တိုင်းပြည်ထဲကို တိတ်တိတ်ကလေးရောက်သွားပြီး တော်လှန်ရေးအသစ်တစ်ခုကို စတင်ဖို့ ပြင်နေပါတော့တယ်။
Che ရွာသားတွေကို ကိုယ့်မိသားစုဝင်များပမာ ဆက်ဆံကြတယ်။ ပိုက်ဆံမပေးပဲ ရွာသားတွေဆီက ဘာ ပစ္စည်းမှ ယူခွင့်မရှိဘူး။ တော်လှန်ရေးလုပ်တဲ့ သူပုန်တပ်ဆိုပေမယ့် အရမ်းစည်းကမ်းရှိတယ်။ မုဒိန်းမှုသာ ကျူးလွန်ကြည့်ပါလား။
ချက်ချင်း သေဒဏ်ပေးခံရမယ် အဲ့စစ်သား . . ။“ ဆရာ . . ရန်သူ့တပ်က အတော် စနစ်ကျတယ်။ဆေးရုံတောင် ရှိတယ် ” ဆိုတဲ့ အာဏာရှင်ဘက်က တပ်မှူးရဲ့ ပြောစကားကို ဒီကားမှာ ကြားရမယ်။အဲ့ဒါတွေထက် ပိုကြီးအရေးကြီးတာ တစ်ချက်ရှိတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ ဒီကားကို စစ်ကားလို့ ယူဆပြီး ကြည့်မယ့်သူတွေကို ပြောချင်တာပါ။
တစ်ခါတလေ စစ်ပွဲ တစ်ပွဲလုံးကို သေနတ်ပြောင်းက ကျည်ထွက်နေတာပဲ ပြပြီး ပြီးရင်လည်း ပြီးသွားပါတယ်။ စစ် တကယ်ဖြစ်နေတာကို ပြရင်လည်း ရိုးရိုးရှင်းရှင်းကြီးပဲ ပြပါတယ်။ ဘာမှ မကွန့်ထားဘူး။ဒီကားရဲ့ ဇာတ်ညွှန်းဟာ . . not about ဒုန်းဒုန်းဒက်ဒက် ပါ။
it’s about loving kindness ပါဗျာ . . ။ဒီတော့ ချခန်းပါမှ ကြိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ Che က ရှောင်သင့်တဲ့ ကားပါ။